Fanadihadiana an'i San Jose, toa an'i Antony Bourdain
Volana vitsy lasa izay, ny Silicon Valley dia nirehareha tamin'ny vaovao fa tonga nitsidika an'i San Jose ny chef, mpanoratra malaza ary Emmy Award-nahazo ny fahitalavitra Anthony Bourdain mba hanao fikarohana amin'ny fampisehoana an-kalamanjana ny Emmy Award, Parts Unknown.
San Jose dia somary malaza noho ny sasantsasany amin'ireo faritra manerana an'i Bourdain manerana izao tontolo izao, fa ireo izay mahalala ny tanàna dia nahatakatra fa naka jiolahy izy tamin'ny fisafidianana ny hanasongadinana ny Japantown ao San Jose - ny faritra telo any Japantown sisa tavela any Californie ary azo lazaina fa tena marina.
Fotoana haingana - Bourdain ihany no nijanona tao amin'ny trano fisakafoanana iray tao an-toerana noho ny resadresaka iray ary nitsidika toerana iray hafa tao amin'ny ekipany ny mpikambana ao amin'ny ekipany, saingy fantatro fa mety ho nankasitraka ny fandaniana fotoana bebe kokoa tao amin'io tanàna miavaka io izy.
Ireto no toerana nalehan'ny Anthony Bourdain (ary ny sasany tokony ho nitsidika azy!) Tao amin'ny Japantown ao San Jose.
Bourdain dia nifanena tamin'ny mpahay tantara Japoney-Amerikana, Curt Fukuda ao amin'ny Minato Restaurant (617 N. 6th Street). Nahafinaritra azy ireo ny sakafon'ny hamachi kama, katsu curry, ary tempura raha niresaka momba ny tantaran'ny tanàna sy ny tantara japoney lehibe kokoa any California.
Tahaka ny trano fisakafoanana hafa ao Japantown, ny Minato Restaurant dia fantatra amin'ny fikarakarana ao an-trano, ny ampahany betsaka, ary ny vidin'ny efa tranainy.
Taorian'ny sakafo antoandro, ny ekipa Bourdain dia voalaza fa nijanona tao San Jose Tofu (175 Jackson Street), orinasam-pianakaviana kely iray izay manana tofu vita tanana.
Raha tsy mihevitra ianao fa tia tofu, mety mbola tsy nisy tofu vaovao mihitsy ianao! San Jose Tofu dia iray amin'ireo mpanao tofu Japone-Amerikana nentim-paharazana izay mbola mitazona tofu amin'ny tanana. Rehefa miditra ao amin'ny trano fivarotany kely ianao, dia indraindray ny mijery ny tompon-trano mahandro, manangona ary manindry ny tofu.
Azonao atao ny mandray ny tovovavy (mbola mafana!) Tofu, mofomamy tsara tofu-ginger, na tavoahangy soymilk homemade.
Ny mpivarotra Shuei-Do Manju (217 Jackson Street) dia manamboatra zava-manitra nentim-paharazana Japoney nentim-paharazana antsoina hoe "manju." Manjono ny sasany, ary ny hafa dia vita amin'ny vary mamy (mochi) na vovoka vary. Indraindray Manju bake bean paste dia manja Manju. Rehefa nitsidika an'i Etazonia i Emperora any Japon, dia nanompo azy ny delegasionan'i Etazonia an'i Shuei-Do's manju. Ny Bourdain dia tsy nahomby tamin'ny fitsaboana mpanjaka!
Tranombakoka Amerikana any San Jose
Ny Museum Amerikana any San Jose (565 N. 5th Street) dia manangona sy mitahiry ny tantara Amerikana Japoney manerana an'i Etazonia, izay mifantoka manokana amin'i Californie. Ny iray amin'ireo tanjona voalohan'ny tranom-bakoka dia ny hitazomana ny ampahany maizina amin'ny tantarantsika izay atahorana ho very - ny tantaran'ireo fianakaviana Amerikana an'arivony izay nogadraina nandritra ny Ady Lehibe II. Ny Bourdain dia tsy manalavitra ny fianarana momba ny ampahany sarotra indrindra amin'ny tantaran'ny vondrom-piarahamonina iray ary mety ho nankasitraka io fanomezam-boninahitra io izy.
Ny Tempoly sy ny Garden Japone.
Mandeha ny fananan'ny Betsuin Church Bishop of San Jose (640 N. 5th Street) mba hijery ny fahambonian'ny tempoly sy ny zaridaina mahazatra. Azonao adino fa any California ianao!
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny tseka Dikanteny tokony homarinana avy amin'ny teny anglisy tseka Anarana iombonana amin'ny teny tseka Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny tseka
Raha mila zavatra bebe kokoa hatao any Japantown San Jose, jereo ity lahatsoratra ity.
Ahoana ny fijerena ireo tombo-kase elefanta ao amin'ny Park State State Ano Nuevo
Kalitao 7 tsy dia mahazatra loatra - ary Instagrammable - Straté
Torolàlana ho an'ny mpitsidika any amin'ny valan-javaboary Death Valley
Yosemite Travel Planner: Torolalana amin'ny Torolalana ho an'ny Herinandro
Karnavalo any Frantsa
Central Boat Tours Central America - Part Two
Ny fiovan'ny mpiambina ao amin'ny Palace Oslo
Babo kiraro Babylon
Manana ny Fair State State Ohio
Sarimihetsika Sugar Maple ao amin'ny Rockwoods Reservation
Ahoana ny fomba fanao amin'ny kisoa (hehy)
Ny fizahan-tany ao amin'ny NBC Studios - Tour de Tour de NBC Studios ao amin'ny Rockefeller Center
Christmas Lights ao amin'ny Tempolin'i Mesa Arizona 2016
Ny Ten Bells Pub London
Fihetseham-po momba ny fihinanan-kanina no mamaly fanontaniana 5 momba ny Cruise Dining
Aiza ho aiza ny any Borneo Maleziana: Sarawak na Sabah?
Ny Holandey sy ny Orange Color